theZOMI: Burma News International - April 24, 2013
Burma News International - April 24, 2013
Shan NGO accuses Myanmar army of using civilians as human shields
The Shan Human Rights Foundation (SHRF) has reported that Myanmar government troops stopped about 50 young men and women onaroad in Tangyan Township in northern Shan State during last weeks’ New Year celebrations and forced them to walk alongside the column as human shields.
US said to be reviewing Myanmar trade ties
Demetrios Marantis, Acting USTR Photo: ustr.govActing US Trade Representative Demetrios Marantis stops off in Myanmar on Wednesday as part of an Asian tour with speculation high that his visit may herald in an end to US import duties on Myanmar goods.
Mystery identity of ‘Dr. Seik Phwar’ to be unveiled
The Union Assembly is likely to expose the identity of Dr. Seik Phwar, an anonymous online critic of the government, in late June when the parliamentary session resumes, according to Phone Myint Aung,amember of the investigation commission on the case.
More political prisoners released from Myanmar jails
Myanmar on Tuesday pardoned dozens of political prisoners, activists said,aday after the European Union agreed to end almost all sanctions against the former pariah state.
Myanmar President Thein Sein hosted Indonesian President Dr Susilo Bambang Yudhoyono at the Credentials Hall of the Presidential Palace on Tuesday evening followingaday when the two countries signed Memoranda of Understanding (MoUs) and discussed bilateral trade.
Burma’s military accused of mass human rights abuses in Shan State as President Thein Sien is awarded peace prize and the EU economic sanctions.
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ယင်လက် ထားဝယ်စီမံကိန်း ထပ်မံဆွေးနွေးမည်
နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေးကိစ္စကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လက် ရှီနာဝပ်ထရာ (Yingluck Shinawatra) က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကြာသပတေးနေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဦးမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ယခင်နှစ်ထက် ထက်ဝက်လျော့သွား
ရေထွက်သယံဇာတ ရှားပါးမှုနှင့် ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခများကြောင့် ယခုနှစ် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ယမန်နှစ် ပမာဏ၏ ထက်ဝက်သာ ရှိကြောင်း စစ်တွေနှင့် မောင်တော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
RCSS/SSA လွယ်တိုင်းလျဲန်းဌာနချုပ် ဗဟိုဦးဆောင်မှုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ WGEC မှ ရေးဆွဲသည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်မူကြမ်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများက ပြောသည်။
SSNA ရဲဘော်ဟောင်း အယောက် ၄၀ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ
လက်နက်ချစဉ်ကတည်းက လွတ်ရက်မရှိ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရသော (ယခင်က) SSNA စဝ်ကန္န၏ ရဲဘော် အယောက် ၄၀ အား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစစ်ဆေးရေးကော်မတီ၌ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သော SNLD ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ယမန်နေ့ကလွတ်မြောက် ကြောင်း ပါတီဝင်လူငယ်များက ပြောပါသည်။
ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး(ကိုးရီးယားဌာနခွဲ) ဥက္ကဌ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရ
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအခြေစိုက် ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး(ကိုးရီးယားဌာနခွဲ)၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ စောလှိုင်မျိုး သိမ်း(ခေါ်) မင်းမင်းသိမ်းကို ကိုးရီးယားအစိုးရမှ တရားဝင်အလုပ်လုပ်သည်ဟူ၍ လက်ရှိ အင်ချွန်းပြည်နယ်၊ အင်ချွန်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သင့်
တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဘက်ဘက်ဝိုင်းဝန်း ဖော်ဆောင်နေချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူတိုင်း ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဖေါ်ဆောင်ဖို့ ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ် စောင့်ကြည့်ရေး အစီအစဉ်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Kayah State Peace Monitoring Network (KSPMN) အဖွဲ့ က ကယား(ကရင်နီပြည်)လူထုကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်တွင် ၁၅၀၀ ကျပ်တန်ဖုန်းကဒ်ကို လွိုင်ကော်မြို့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအတွက်ဦးစားပေးရောင်းချ
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် CDMA 800MHz ဖုန်းကဒ်ကို လွိုင်ကော်မြို့နယ် နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများအတွက် ပထမဦးစားပေး ရောင်းချပေးသွားတယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးရ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီး ဦးချစ်လှက ပြောပါတယ်။